Kudzivirirwa & Inishuwarenzi Inishuwarenzi
Kusiyana mamiriro ezvinhu kunogona kuve nemigumisiro yakasiyana pa inshuwarisi yako
Hapana anofarira kufunga nezvekufamba kwenyika dzakawanda sechinhu chinotyisa. Asi munyika yemazuva ano tinogara mungozi, njodzi inogona kugara ichikomberedza pakona. Uye semabasa ekupedzisira pasi rose akaratidza, hugandanga hutsva hunoita kuti vafambi varambe vachitarisana.
Savvy vafambi vanoshanyira nyika pasi pekusagadzikana kwezvematongerwe enyika vanoziva kuti kufamba kwehushuwarisi haisi yekusarudza kutenga - ndiyo inofanirwa, kuti idzivirirwe kubva pane chakaipa chakaitika.
Asi izvo vakawanda vasinganzwisisi ndezvokuti kufamba kwakanyanya inshuwarisi hakugone kuvabatsira kana zviitiko zvegandanga.
Nzira Yokufamba Inishuwarenzi Vanopai Vanotsanangura Ugandanga
Mutevedzeri wemunhu anotsanangura ugandanga haufaniri kuva tsanangudzo imwechete yakagoverwa nefambi yehupenyu inshuwaridzi. Mune mamiriro ezvinhu akawanda, kufamba kwako inshuwarisi mupuritsi kunogona kunge kune tsanangudzo dzakawanda dzemamiriro akasiyana, akadai se "chirwere chevanhu" uye "ugandanga."
Mune zviitiko zvakawanda, iwe wechitatu-fambisi yekuendesa inshuwarani (chirongwa chinotengwa zvakananga kubva kune inhamba yehupfambisi yunivheti, kwete iwe wekufambisa mufambiro kana kambani yekwereti yekwereti) ichafukidza hugandanga sechikonzero chakavharidzirwa cherwendo kunonoka uye kuenda kurambidzwa. Zvisinei, tsanangudzo dzingasave dzakafanana pakati pevanopa. Semuenzaniso, Travel Guard inotsanangura ugandanga se: "Chiito chechisimba chinoguma nekurasikirwa noupenyu kana kukuvadza kukuru kubva kune munhu ari kuita nenzira yekuparadza hurumende kana kuitora." Kana mamiriro ako asina kukwanisa kutsanangurwa iyo, saka zvingave zvisina kuonekwa sehugandanga - zvichireva kuti iwe haugoni kuwana zvikwereti.
Paunotenga chirongwa che inshuwarisi yefambiro, ita nechokwadi kuti unonzwisisa izvo uye hazvifukidzwi kana zvasvika kune chiito chegandanga.
Kutenga Travel Travel Pamberi Pechiitiko
Nyanzvi dzakawanda dzinoti kutenga kutenga inshuwarisi yakanaka zvakanaka mberi kwemamiriro ezvinhu. Asi wakanga uchiziva here kuti kutenga inshuwarisi yako yekufamba nekukurumidza iwe paunenge uchitora rwendo rwako kunogona kukodzera iwe kuti uwane zvikomborero zvaunofanirwa nazvo?
Zvakafanana nechamupupuri, vazhinji vanoenda inshuwarisi yevashandi vanoona kusagadzikana kwezvematongerwo enyika uye mabasa ehugandanga sezviitiko zvinotaridzika. Kana imwe nguva chiitiko chikaitika chinosangana netsanangudzo yehutachiona hwevanhu kana hugandanga, sekuyeverwa kwekufamba kubva kuDhipatimendi reHurumende, mamiriro acho anoona zviri mberi - zvichireva kuti havachagoni kupa ruzivo rwemamiriro ako akasiyana. Semuenzaniso: Travelex munguva pfupi yapfuura yakabudisa chirevo chekugara kuti vafambi vangave vachienda kuIsrael uye vari "... vachibvunza nezvekutenga chirongwa chekuchengetedza cheTravelex mushure meJuly 8, 2014, chinyorwa hachizogoni kuitwa sezvinoitika zviitiko zvino." Nemhaka yekuti mamiriro ezvinhu ari kuenderera mberi uye anotaridzika, Travelex haingabatsiri kune vanofamba kuenda kuIsrael.
Nokutenga yako inshuwarisi yekufambisa kare, unogona kuve nechokwadi kuti kufamba kwako kwakavharwa pasi pemamiriro ezvinhu akaipisisa, zvisinei kuti chii. Mune zvimwe zviitiko, kutenga inshuwarisi yekutambira mukati memazuva ekuisa pasi yako yokutanga mari yako parwendo ingangodaro ndiyo nzira chete yekuwana rubatsiro rwehugandanga. Iva nechokwadi kuti unoziva kuti kutengesa kwekutanga kunogona kukukwanisa sei iwe purogiramu imwe neimwe inobatsira.
Cancel Chikonzero Chero Chero Kufamba Inishuwarenzi neUgandanga
Imwe mamiriro ekufananidzira ndeyekuti kubatsira kwehugandanga uye kusagadzikana kwehurumende kunoshandiswa sei kune inofambisi yendege yako.
Vakawanda vanoenda inshuwarisi vanotengesa vakanyanyisa kunotsanangurwa kwavo kwehugandanga uye kusagadzikana kwevanhu. Kana mamiriro ezvinhu achiita kuti urege kunakidzwa, asi haasvikanisi tsanangudzo yavo yekukumbira zvikwereti, saka iwe unogona kusakodzero yekufambisa ruzivo rwekufamba.
Kana iwe uine hanya nezvekuputsa mamiriro ako zvisati zvaitika iwe unogona kuita kuti urege kunetseka, ipapo ngatitange kutenga inshuwarheni yekufambisa yendege neChenesa yeChikonzero chipi nechipi chinobatsira . Nekufamba kwekufambisa kunogona kunge kwakagumira kune tsanangudzo yemutemo, Chengetedza Chero Chero Chero Chikonzero chinokubvumira kubvisa pamagariro ako, uye kudzorera zvimwe zvekufamba kwako kwekutsvaga. Kana uri kufunga nezvekutenga Kanesa kweChikonzero chipi nechipi, iva nechokwadi chokuti utenga mutemo wako pamwe chete neurongwa hwako hwekutanga hwokufamba: zvirongwa zvakawanda zvine nguva yaunogona kutenga nayo zvikomborero zvako.
Nokunzwisisa maitiro ekufambiswa kweinishuwarenzi maitiro ehugandanga uye mhirizhonga dzehurumende, unogona kuve nechokwadi kuti uri kuwana kudzivirirwa kunonyanya kupi zvako kwaunoenda munyika. Apo isu zvirokwazvo tinotarisira kuti hauna kumbobatwa mune chimwe chezviitiko izvi, kugadzirira nekukunzwisisa nhasi kunogona kudzivisa kuzvidya mangwana.
Ko Kufamba Kwangu Inishuwarenzi Ichandivhara MuHondo Yehondo kana Kurwisana Kwevanhu?
Inishuwarenzi yeTravelex: The Complete Guide
Mamiriro Matatu Anowanzova Chiitiko Chinozivikanwa
Iko Kadhi Kadhi Inofambisa Inishuwarenzi Iri nani Kupfuura Mutemo Wemaitiro
5 Nhema dzePasipoti Mufambi Wega Wega Anogona Kukanganwa
Vatatu Makadhi Makadhi ne Great Travel Insurance Makomborero
Bavaria Ndeimwe yeLonely Planet's Top Destinations
Do not Miss These Attractions in Ottawa
Phoenix Gay Sex Makirasi Nezvivako Zvokufambisa
Nzira Yokupedza Zuva raValentine muLos Angeles
Amai Day Day Brunch muVancouver, BC
Nyaradzo yeItaly PaCarbon Las Vegas
Santa Cruz Camping - Nzvimbo dzepamberi - RV Parks
Mabiko eMedeval muLondon
Zvaunotarisira Nehurumende muGreenland
Best Museums Museums
Phoenix Sky Harbor Airport Nhare Yomirira Zuva